बजार मा मांग जसको लागि सधैं उपस्थित कर्मचारी रिक्त पदों, छन्। यो मुख्यतया एक कम भुक्तानी छ कामदारहरूको विशेषता र Waiters। एक सरल कुरा, विशेष शिक्षा आवश्यक गर्छ प्रायजसो छैन र पनि - एक वेटर रूपमा काम अनुभव काम। तर लामो समय को लागि यो स्थिति काम मा एक नियम, रूपमा। एक rarity - यो वेटर पाँच अधिक वर्ष को लागि कार्यरत गरिएको छ। यो एक वेटर को काम र वेटर पेशा बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ जब यो मामला छ। यी अवधारणाहरु भिन्नता?
पहिलो, वेटर पेशा व्यक्ति उनको mastering, तैयार, एक लामो समय को लागि उनको काम बढ्न र नयाँ हाइट्स पुग्न तयार संगत गर्न भनेर presupposes। हो, oddly पर्याप्त, यो पेशामा मा बढ्न कोठा छ। ठीक रेस्टुरेन्ट र होटल, जहाँ एक वेटर मात्र कुलीन गर्न "प्रकाश" को काम, खराब छोड्न एक टिप मा धेरै सभ्य पैसा कमाउन गरौं, तर धेरै धनी आगंतुकों।
दोस्रो, यो पेशामा सिक्न र बस Waiters रूपमा काम छैन, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, एक क्यारियर निर्माण गर्ने अभिप्राय गर्नेहरूले वेटर, को क्लीनर पछि जहाँ - सबै भन्दा कम स्तर। वेटर काम चाँडै रेस्टुरेन्ट भित्र व्यापार को प्रबेश र बहिष्कार सिक्न र प्रशासक कार्यालय मा अवश्य वा रेस्टुरेन्ट प्रबन्धक हुनेछ अनुभव हासिल गर्न अनुमति दिन्छ।
तर यो काम अक्सर थप सभ्य सक्छन् केहि अझै गणना कारण शिक्षा वा अनुभव कमी गर्न जो मानिसहरू जान्छ। सामान्यतया तिनीहरूले सामाग्री स्थायी लागि उपकरण सम्म यसको स्थिति कायम गर्न अनुमति दिने, अस्थायी रूपमा यस्तो काम विचार गर्नुहोस्। विद्यार्थी तिनीहरूलाई धेरै, यस्तो काम शिक्षा प्राप्त र पैसा को जारी उपलब्धता सुनिश्चित गर्न रोक्दैन।
तर एक आफ्नो विचार छैन भने पनि काम एक पेशा, उहाँले गम्भीर कसरी वेटर रूपमा काम गर्न सिक्न हुनेछ। यसो गर्न, तपाईं विशेष पाठ्यक्रम वा विद्यालय Waiters समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले अनुभवी सहयोगिहरु को निर्देशन अन्तर्गत आफ्नै अनुभव मा सिक्न सक्छौं - यो क्षेत्रमा विशेषज्ञहरु।
मेनु तिनीहरूलाई परिचय, लिन र तालिका ग्राहक गणना र खाली गर्न आदेश ल्याउन: सेवा प्रयोगकर्तालाई द्रुत र भद्रताका साथ - यो वेटर को मुख्य कार्य। यो जस्तो थियो, यसको बारेमा जटिल केही छैन। यो शिष्टाचार सबै नियमहरू पालन गर्न गाह्रो छ। एक महिला, मानिस वा बच्चा - यो वेटर जसलाई पहिलो सेवा थाहा हुनुपर्छ। तालिका सेवा एक अनुभवी वेटर जहाँ माछा एक चक्कु राख्न र जहाँ त्यहाँ केक को एक प्लेट हुनुपर्छ उहाँले सधैं थाह मिनेट को एक कुरा लिन्छ।
quickness पछि वेटर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण - politeness। उहाँले कायम गर्न एक रेस्टुरेन्ट मा थियो र पनि सेवा गर्न भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। र हँसिलो निरन्तर छ, कि स्पष्ट खुशी, यसलाई गर्न। साँच्चै सक्नुहुन्छ नगर्ने एक मानिस मान्छे मा मुस्कान, तिनीहरूलाई सेवा, उहाँले एक वेटर रूपमा उपयुक्त काम छैन categorically छ भनेर बुझ्न पर्छ। जो यस्तो कर्मचारीहरु को आय को सिंहको शेयर बनाउन सुझाव मा समीक्षा, खुसी छैनन्।
आवेदक - यो हुनुहुन्छ? को धारणा
कार्यालय प्रबन्धक - यो हुनुहुन्छ? कर्तव्य कार्यालय प्रबन्धक
सीईओ (शीर्षक): ट्रान्सक्रिप्ट। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: अनुवाद
स्वतन्त्रता-मायालु कविता - यो छ ... कस्तो स्वतन्त्रता-मायालु छ कविता?
100 ग्राम चीनी - यो कति छ? उनीहरूको मापन गर्न कति सजिलो छ?
जीवन मार्ग र त्यसको अर्थ।
मानकीकरण र मैट्रोलोजी - के पेशा? मानकीकरण र मैट्रोलोजी लागि ईन्जिनियर
भारतीय महासागर - दुनिया मा न्यानो समुद्र